Miantomboka ao an-tokantrano ny ezaky ny tena asa misionera
"Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanan-tsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo." - Lio. 1:6.
Amin'ny fanorenany fifandraisana amin'i Kristy, no maha-tafaverina indray ilay olom-baovao eo amin'ny fifandraisana voatendry amin'Andriamanitra (...) Ny andraikiny voalohany indrindra dia ny zanany sy ny fianakaviany akaiky azy. Tsy misy na inona na inona azony atao fialan-tsiny amin'ny fanaovany ambanin-javatra ireo vondrona akaiky azy indrindra noho ireo vondrona mivelatra kokoa any ivelany. Hanontaniana ireo ray sy reny, amin'ny andro anaovana ny tatitra farany, mikasika izay nataony sy nolazainy mba ho famonjena ireo fanahy izay niandreketany ny fitondrana azy ireo teto amin'izao tontolo izao. Nanao ambanin-javatra ny ondriny ve izy ireo ka nandao azy ho eo ambanin'ny fikarakaran'ny vahiny? (...) Ny asa soa lehibe natao ho an'ny hafa dia tsy hanafoana velively ny trosa ananan'Andriamanitra aminao, dia ny hikarakaranao ireo zanakao. Ny fahatomombanan'ny ara-panahin'ny ankohonanao no zava-dehibe voalohany indrindra. - GCB, 1 Aprily 1899.
Nankinina amin'ny reny ny asa lehibe indrindra nomena ny zanak'olombelona, eo amin'ny fanazarana sy famolavolana araka ny tokony ho izy ny sain'ny zanany. - Ms, t. 29, 1886.
Na oviana na oviana no andraisanao ny andraikitra izay napetraka taminao, dia hotahin'Andriamanitra ianao, ary reny ny fivavakao. Maro tokoa ireo mandeha manao asa misionera any ivelany, kanefa ny ankohonany tavela tsy mahazo ny fikarakarana ara-panahy sahaza azy ka tratry ny fahavoazana vokatry ny tsirambina. Ny asa misionera voalohany indrindra, dia ny fahitana fa tonga eo anivon'ny tokantrano ny fitiavana sy ny fahazavana ary ny fahasambarana. Aoka isika tsy hikatsaka fahalalana onony lehibe na koa asa misionera atao raha tsy efa tontosantsika aloha ny adidy ao an-tokantrano. Ilaintsika ny hisaintsaina isa-maraina hoe: Inona ny asa azoko atao anio? Inona ny teny mamy azoko lazaina? Ny teny mamy ao an-tokantrano dia tara-masoandro feno fitahiana. Mila izany ny raim-pianakaviana, mila izany ny renim-pianakaviana, mila izany ny ankizy (...) Tokony ho fanirian'ny fo tsirairay avy, araka izay tratrany, ny hanao paradisa eto an-tany. - RH, 23 Desambra 1884.
Ny fanahy iray voavonjy ao amin'ny fianakavianao na eo amin'ny fiarahamonina misy anao, noho ny faharetanao sy ny asa mafy nataonao, dia hitondra voninahitra lehibe ho an'ny anaran'i Kristy sy hamirapiratra aoka izany eo amin'ny satroboninahitrao, toy ny hoe tany Sinina na India no nahitanao izany fanahy izany - ST, 10 Novambra 1881.